Falanqaynta iyo Tijaabada | Martech Zone
Falanqaynta, la socodka, feejignaanta iyo dhibcaha, tijaabada a/b, badeecadaha kala duwan ee tijaabada, xalalka, agabka, adeegyada, xeeladaha, iyo hababka ugu wanagsan ee ganacsiyada ee ka yimid qorayaasha Martech Zone.
Markaad aragto ololahaaga iimaylka, waxaa jira tiro cabbirro ah oo aad u baahan tahay inaad diirada saarto si aad u horumariso guud ahaan waxqabadka suuqgeynta iimaylka. Dabeecadaha iimaylka iyo teknoolajiyada ayaa horumaray wakhti ka dib - markaa hubi inaad cusboonaysiiso siyaabaha aad ula socoto waxqabadka iimaylka. Fiiro gaar ah: Mararka qaarkood waxaad arki doontaa inaan isticmaalo cinwaanka iimaylka iyo meelo kale, iimaylka qaab-dhismeedka hoose. Sababta tani waa in qoysaska qaar ay dhab ahaantii wadaagaan